Mitsitsia vola ary manahy! Ahoana ny fomba handaminana ny kitapo kosmetika Capsule mety indrindra?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-08-10
Inona no atao hoe "kitapo kosmetika kapsula"? Izy io dia mitovy amin'ilay "wardule kapsule" antsoin'ny tsirairay matetika. Na dia tsy dia be loatra aza ireo entana ao anatin'ity sakaosy kosmetika ity dia misy ny "entana fototra" ilaina amin'ny makiazy isan'andro. Ary ny vokatra ...
Ahoana ny fomba fanamboarana amin'ny fahavaratra izay tsy matavy sy tsy mihetsika!
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-07-14
Hatramin'ny nanombohan'ny fahavaratra, ny aretin'andoha lehibe indrindra toa ahy izay tsy mitsahatra manenjika ny hatsaran-tarehy dia ny manala ny makiazy amin'ny fahavaratra, indrindra rehefa mafana ny makiazy ary miempo ny makiazy. Rehefa afaka makiazy matotra antsasak'adiny dia lasa lasa miloko matevina ...
Lipstick 3 izay mety tsara amin'ny fahavaratra, mitomany ny hatsaran-tarehy!
Tsy mitovy amin'ny fahatsapana "mavesatra" amin'ny fararano sy ririnina, ny fahavaratra dia saika "mamelombelona" hanala azy, ary ny makiazy koa dia fironana amin'ny fahazavana sy mangarahara. Fa na toy inona na toy inona mangarahara ny makiazy, ny fametrahana lokomena dia mbola dingana iray tsy maintsy ilaina amin'ny olona maro. ...
Manaova fomba 4 fanaovana makiazy amin'ny maso, aloky ny maso iray monja dia ampy!
avy amin'ny admin tamin'ny 21-05-31
Mino aho fa maro ny hatsaran-tarehy manana an'io karazana olana io. Aloky ny maso maro loko maro no mahatalanjona raha vao jerena. Rehefa avy nametraka baiko tamim-pahanginana izy ireo dia nahita fa tsy manana fomba hanombohana. Amin'ny farany, ny anjaran'izy ireo dia azo avela ho lasa lavenona ao anaty vatasarihana ihany ....
Fomba fampiharana makiazy, ataovy mora amin'ny dingana 5
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-26
Dingana 1: zavakanto ny fampiharana ny makiazy. Ny hoditra malama sy malefaka no fitaovana tsara indrindra ho anao. Mba hahatratrarana izany dia mila moisturizer. Sasao ny tarehinao ary apetaho malalaka, omeo minitra vitsy ny hoditrao handraisana ilay menaka fanosotra na famafazana. Dingana 2: Primer Primer dia manampy amin'ny fanomanana ny hoditrao amin'ny ...
Ahoana ny fomba hisafidianana volomaso diso ho an'ny bikan'ny masonao?
Betsaka ny olona very hevitra momba ny fomba hahalala ny endrik'izy ireo manokana sy ny fomba hisafidianana ny volomaso diso. Ireto ambany ireto ny fampidirana an-tsipiriany sy ny soso-kevitrao amin'ny fanovozan-kevitrao. Kalocils Beauty dia manolotra pilotra sandoka tsara indrindra ho anao. ...
Ny fomba fanamboarana ny sary manokana anao, ny fizotran'ny fanaingoana matihanina dia mamonjy ny fotoanao sy ny ezaka ataonao.
Ny fomba fanamboarana ny sary manokana anao, ny fizotran'ny fanaingoana matihanina dia mamonjy ny fotoanao sy ny ezaka ataonao. 1, Alefaso ny rakitra logo Ho an'ny fanaingoana ny logo, azafady alefaso ireo rakitra loharano logo amin'ny endrika AI na PDF. Ny fisie logo mazava dia afaka manampy antsika hanolotra tsara kokoa ny vokatry ny fanontana ny sary famantarana rehefa manonta. Ny i ...
Ahoana ny fametrahana volomaso diso, fomba mora indrindra hahatonga ny masonao hamirapiratra sy hidradradradra
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-12-07
Fomba fanosorana volomaso sandoka, fomba mora indrindra hahatonga ny masonao hamirapiratra sy glamor 1, Miomàna manao volomaso diso. Tazomy amin'ny masonao ny fehikibo, mba hahitanao ny lavany mety tsy ho lava loatra, izay tsy hahazo aina ...
Ny taham-pitomboan'ny fivarotana antsinjarany amin'ny volana Oktobra dia intelo raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana iray tamin'ny taon-dasa, mitontaly 28,1 miliara Yuan, fitomboana 18,3% isan-taona
Tamin'ny 16 Novambra, namoaka angon-drakitra ny birao nasionalin'ny statistika izay naneho fa tamin'ny volana oktobra, ny totalin'ny varotra antsinjarany ho an'ny mpanjifa dia 3.857,6 miliara yuan, fiakarana 4,3% isan-taona, ary ny tahan'ny fitomboana dia 1,0 isan-jato isan-jato. avo kokoa noho ny volana teo aloha. Anisan’ireny ny t ...
Ny kalitaon'ny vokatra makiazy ambony dia avy amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ary fitantanana sy kalitao kalitao. Nanchang Weiti Technology Co., Ltd. dia orinasa fanaovana haingon-tarehy isan-karazany manambatra ny fampandrosoana ny vokatra, ny famokarana ary ny varotra an-tserasera. Manaraka ny lalànan'ny orinasa "Q ...
Volomaso diso amin'ny volon'ny biby sy volo artifisialy, iza no tsara kokoa aminao?
1, Volo Biby Volo biby dia natao volom-bolo sandoka avy amin'ny volo nalaina avy amin'ny biby. Raha ampitahaina amin'ny volomaso, dia misavoritaka kokoa izy io, saingy satria volo nalaina tamin'ny biby dia mitovy amin'ny volon'ny vatan'olombelona, ​​miaraka amin'ny menaka kely. Manana fahatsapana gloss. Volom-biby samihafa ...
Mpivarotra volomaso, lipgloss, Volomaso maso, Fanitarana volomaso, eyeliner, kapoka mink,